I-Buzz, Viral okanye iLizwi lokuThengisa ngomlomo: Uyintoni umahluko? | Martech Zone
I-Buzz, Viral okanye iLizwi lokuThengisa ngomlomo: Uyintoni umahluko?
NgoLwesibini, Aprili 14, 2015 NgoMvulo, Aprili 13, 2015 Douglas Karr
UDave Balter, umseki we I-BzzAgent, Yenza umsebenzi omkhulu ekuchazeni umahluko kwi I-Buzz, Intsholongwane kunye neLizwi lokuThengisa uMlomo kolu hlelo lweTshintshoLolu. Nazi izicatshulwa ezineenkcazo ezinkulu zikaDave:
Yintoni iLizwi lokuThengisa ngomlomo?
Intengiso yeMlomo (I-WOMM) sesona sixhobo sinamandla emhlabeni. Ukwabelana okwenene koluvo malunga nemveliso okanye inkonzo phakathi kwabathengi ababini okanye ngaphezulu. Yinto eyenzekayo xa abantu besiba ngabathetheli bebhrendi yendalo. Sisipha esingcwele sabathengisi, ii-CEOs kunye noosomashishini, njengoko inokwenza okanye yaphule imveliso. Isitshixo sempumelelo yayo: kukunyaniseka kwendalo.
Yintoni ukuthengisa ngentsholongwane?
Intengiso yintsholongwane ngumzamo wokuhambisa umyalezo wentengiso osasazeka ngokukhawuleza nangokucacileyo phakathi kwabathengi. Namhlanje, oku kuhlala kuza ngohlobo lomyalezo we-imeyile okanye ividiyo. Ngokuchasene nokoyika iialarms, intsholongwane ayibi. Ayikokungathembeki okanye okungeyiyo eyendalo. Eyona nto ingcono, ligama lomlomo elenziwe lasebenza, kwaye eyona nto imbi, ngomnye nje umyalezo ophazamisayo wentengiso.
Yintoni iBuzz Marketing?
Ukuthengisa kweBuzz ngumsitho okanye umsetyenzana owenza ukuba uluntu lubenomdla, lube nemincili kunye nolwazi. Ngokwesiqhelo iyinto edibanisa i-wacky, umsitho wehla emhlathini okanye amava ngamagama acocekileyo, njengokufaka umvambo ebunzi (okanye iesile lakho, njengeklabhu yezempilo ye-NYC kutshanje). Ukuba i-buzz yenziwe ngokufanelekileyo, abantu baya kubhala ngayo, ke yona iba sisithuthi esikhulu se-PR.
Nantsi i-infographic ekhethekileyo kwiLizwi lokuThengisa uMlomo (WOMM) ukusuka eLithium:
tags: ukuthengisa kwe-buzzlithiumintengiso yentsholongwanemfaziWOMMilizwi lomlomoukuthengisa-ngomlomo
Iinqanaba ezi-5 eziphambili zeWebhusayithi kufuneka ukuba uzihlalutye
Jun 17, 2008 ngo-9:41 AM
Kum ndicinga ukuba i-Word of Mouth yeyona ndlela ibalaseleyo yokuthengisa, kodwa emva koko ndiyacinga ukuba ibuyela kwinto abayithethayo abantu ngawe. Inokuba likrele elibukhali kabini. Thatha ishishini lemiboniso bhanyabhanya umzekelo. Ndiya kwimuvi xa abahlobo bam bendixelela ukuba babone imuvi kwaye bayayithanda. Kwi-flip side, xa ndivuya nge-movie kwaye ndifumana ingxelo embi kumhlobo, ndenza ngokuchasene ngqo.
Ndiyazibuza ukuba oku kuthe ngqo phambili ngeeblogi kunye newebhusayithi?